Zoomgu: Makina akangwara ekutengesa anoita smart shopu yakapusa uye yakapusa-Indaneti nhau-Hunan Zhonggu Science uye Technology Co, Ltd.
Zoomgu: Makina akangwara ekutengesa anoita smart shopu yakapusa uye nyore
Zoomgu iseti yekutengesa muchina yekutsvagisa nekusimudzira kugadzira, huchenjeri hwekunyepedzera, Internet yezvinhu, gore masevhisi, data hombe, kubhadharisa nhare, vending muchina Hardware uye software yekuvandudza uye tekinoroji yekugadzirisa mune imwe yemabhizimusi epamusoro-soro, anogara achitevedzera yakazvimirira kutsvagisa nekusimudzira, kwakadzika kurima nekutengesa muchina indasitiri kwemakore gumi nemanomwe. Parizvino, kambani ine zvinopfuura zana mainjiniya anoumbwa nekutsvaga uye timu yekusimudzira.
Machine online nhamba, yakafanana-yezuva nzira yekubhadhara, muchina kukura dhata, kuongororwa kwezera revakadzi ... Pachiratidziro muhoro yekuratidzira, mutori wenhau akaona kuti iyo data pane hombe data chikuva cheSAAS Smart Operations yeZoomgu iri kugara ichigadziriswa.
Parizvino, angangoita mazana maviri emvumo yakashandiswa, kodzero dzepfuma yemhando dzakasiyana siyana dzekuchengetera mhando, dzakabatanidzwa nzira dzakasiyana dzekubhadhara, kusanganisira gumi nematanhatu ekugadzira patents, utility modhi patents 200, software copyright kupfuura zvinhu gumi. Kusvika parizvino, Zoomgu zvigadzirwa zvefekitori mumusika kuti zvigadzirise angangoita 14 mayuniti, iyo goho kukosha inotarisirwa kusvika 129 mamirioni yuan gore rino, goho rakapfuura 10 mayuniti, zvichiratidza kuramba kwakasimba maitiro.
Zvadaro: Iyo indasitiri yemuchina yekutengesa iri kupinda munguva yemurume.